रेडियो ताप्लेजुङ प्रचण्ड, विष्णु पौडेल र बादललाई भनेको छु- यो त अति भयो !
कार्तिक १८ गते । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मन्त्री वर्षमान पुनलाई भेट्न सिंहदरबारस्थित उनको कार्यकक्षमा पुग्दा पार्टी अफिसमा जस्तै नेकपाका नेताहरुको भीडभाड थियो । एकातिर उर्जासचिव, अर्कातिर एमालेका पूर्वसचिव मन्त्री पुनलाई भेट्दै थिए ।
पूर्वमाओवादी नेतासमेत रहेका मन्त्री पुनसँग हामी दुईवटा विषयमा अन्तरवार्ता गर्न साँझ परेपछि सिंहदरबार छिरेका थियौंः एउटा- नेकपाको संकटबारे, अर्को -समग्र सरकार र उनले चलाइरहेको मन्त्रालयबारे ।
संगठनात्मक एकताबारे महासचिव विष्णु पौडेल र कार्यदलमा रहनु भएकाले रामबहादुर थापा बादलजीलाई पनि भेटेरै भनेको छु-यो त अति भयो ।
झापा आन्दोलनपश्चात वर्षौं छिन्नभिन्न भएको आन्दोलनकारी शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउनु उपलब्धि हो । जनताले यसलाई अनुमोदन गरेर मत पनि दिएका छन् । अहिले साना(साना समस्याले नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न उठेकाले सकिने जति निर्णय गरेर पठाऔं र बाँकी कुरालाई म्यानेज गरेर जाऊँ भनेर नेतृत्वलाई सुझाउँदै आएको छु ।
किनभने, यतिबेला नेता/कार्यकर्ता परिचालन भएकै छैनन् । जब नेता/कार्यकर्ता परिचालन हुन्छन्, तब त्यसले सरकार र पार्टीका काम/कारबाही जनतासम्म पुर्‍याउन मद्दत गर्छ । यति मात्रै होइन, यसले जनतामा उठेका विभिन्न जिज्ञासा र विचारहरु नेतृत्वसम्म ल्याई ‘टु वे कम्युनिकेसन’ को अहिलेको अभावलाई पनि दूर गरिदिनेछ ।
तर, जति नै विश्वास दिलाउन खोजे पनि जनतामा आशा जाग्न सकिरहेको छैन‘।
यसका केही स्टेपहरु छन् । अहिले देश संघीयताबाट अगाडि बढिरहेको छ । राजनीतिक पुनर्संरचनापछि निर्वाचन भए पनि प्रशासनिक पुनर्संरचना हुन बाँकी नै छ । मलाई लाग्छ( यसले अझै ५र७ महिना समय लिन्छ ।
जस्तो-अहिले ‘प्लस टु’सम्मको शिक्षादेखि आधारभूत स्वास्थ्यसम्म स्थानीय तहलाई गएको छ । तर, सिंहदबारले नै दिनुपर्छ भन्ने जनताको अपेक्षा छ । तर, स्थानीय तह पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
तर, विपक्षी त कमजोरै छ नि होइन र रु विपक्षीलाई देखाएर उम्किने अवस्था छ र ?
तर, नेकपाले सरकार चलाउन सक्दैन र पश्चिम बंगालको कम्युनिष्ट सरकार जस्तै सेटब्याक खान्छ भन्नेखालका विश्लेषण पनि आउन थालिसके‘।
अहिले देशको सबै राजनीतिक, प्रशासनिक, बौद्धिक प्रतिभा नेकपामा केन्द्रित भएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा नेता मात्र होइन, सबै खालका विज्ञहरु यसैमा केन्द्रित छन् । नेकपाले गरेन भने नेपालले केही दशकसम्म गर्न सक्दैन । यसमा चाहिँ अहिल्यै निष्कर्षमै पुगिहाले हुन्छ ।
तर, प्रश्न के हो भने हामीसँग क्षमता छ, प्रतिभा छ, हामीसँग राम्रा राम्रा पात्रहरु पनि छन्, तिनलाई केन्द्रित गरेर परिचालित गर्नेमा हाम्रो अलिअति कमजोरी पनि भयो कि ?
प्रधानमन्त्रीलाई जाँच्न कति वर्ष लाग्ला रु एक वर्ष कि पाँच वर्ष ?
प्रधानमन्त्रीलाई त ५ वर्षकै लागि भनेर म्यान्डेट दिइएको छ, त्यसैले ५ वर्ष लगाएरै जाँच्नुपरेन रु जनतासँग ५ वर्षमा काम गर्छौं भनेर म्यान्डेट लिने अनि ५ महिनामै तेरो परीक्षा लिन्छु भन्न त भएन नि । ठीक छ, अर्धवाषिर्क परीक्षा लिए हुन्छ, तर फाइनल परीक्षामा भाग लिने अवसर दिनुपर्छ ।
तर, अहिले कलेजहरुमा त सेमेष्टर सिस्टम आइसक्यो‘।
त्यसैले विस्तारै विपक्षीको आलोचना र आक्रमणलाई फेल गर्दै पछि निस्किँदा त यो सरकार सिरिज जितिराखेको क्याप्टेन भइराखेको १ यस्तोचाहिँ भन्ने गरेको छु । त्यो सम्भव छ र हुन्छ ।
तपाईले यो ७र८ महिनामा कति रन हान्नुभयो त रु अहिलेसम्म केके काम भए ?
अहिलेसम्म नेपालमा जलस्रोत नीति नै थिएन । अहिले हामीले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति निर्माण गरेका छौं र अगाडि बढाएका छौं । यसले स्थानीय जल कसरी उपयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्छ । खानेपानी, सिंचाइ, जलविद्युतका साथै अरु मनोरञ्जन र वातावरण संरक्षणमा जलको उपयोग कसरी गर्ने रु प्रदेशले कसरी गर्ने रु संघले कसरी समन्वयात्मक काम गर्ने रु यसबारे हामीले जलस्रोत नीति बनाएका छौं ।
आन्तरिकरुपले पनि खपत बढाउँछौं । यसरी हामी आगामी ५र१० वर्षमा कम्तिमा पनि ५ हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने ठाउँमा पुग्छौं । तीन वर्षमा पाँच हजार विद्युत निकाल्ने गरी योजनामा बनिराखेको छ । अहिले ४ हजार मेगावाट निमार्णको चरणमा गइसकेको छ ।
मानिसहरुले भन्छन्, विद्युतमा लगानी त गर्ने तर, अरबौं अरब लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । देशभित्र कति खपत हुन्छ, त्यसको बजार बनाउनुपर्‍यो । बाँकी के गर्ने त भन्दा हामीले भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गरेका छौं । चीनसँग हामीले सम्झौता गरेका छौं । अहिले हामीले बंगलादेशसँग पनि सम्झौता गरेका छौं । बिमस्टेक देशहरुमा प्रसारण लाइन जोड्ने र विद्युत बिक्री गर्ने सञ्जालका लागि एमओयु गरिसकिएको छ ।
म अस्ति सोलु कोरिडोर गएँ । त्यहाँ आयोजना आइहाल्ने प्राइभेट सेक्टरबाट । तर, ट्रान्समिसन नबन्ने । यसमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ । आयोजना प्रमुख को हो रु प्राधिकरणको नेतृत्व पनि यसमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ र सबै शक्ति लगाएर त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी, हाम्रो विद्युत प्राधिकरणले किन्ने बिजुलीमा ‘टेक अर पे’ को खुब हल्ला छ । यसमा म मन्त्री भइसकेपछि भनेको छु, उत्पादित विद्युतको म मार्केट खोज्छु । कतिपय सुन्न आउँछ, केहीले लेखेका पनि छन् । सबै आयोजनको विद्युत खरीद गर्दा प्राधिकरणले घाटा खान्छ । मै अर्थमन्त्री हुँदा प्राधिकरण ऋणमा डुबेको थियो, त्यसलाई मिनाहा गर्दियो सरकारले । महराजी अर्थमन्त्री हुँदा ८र१० अर्ब भन्दा बढी गर्दिनुभो ।
अहिले २८-३० अर्ब भएको छ । प्राधिकरणलाई समस्या हुँदा सरकारले हेरेको छ । यो सरकारको कम्पनी हो । मैले बाहिर प्राधिकरणका केही साथीहरुले बोलेको सुनें । मैले तपाईंले गैरजिम्मेवार रुपले नबोल्नुस भनेको छु । अहिलेसम्म सरकारले हेरेको छ । फेरि पनि सरकारले हेर्छ । म मन्त्री हुँ । म विद्युतको बजार बनाउँछु । १५ हजार मेगाबाट हुन्छ । १० हजार मेगावाट देशभित्र खपत गरौं, ५ हजार बाहिर बेचौं । यसको जिम्मा मेरो भयो ।
देशमा विद्युको खपत बढाउनुपर्छ । हामी विद्युतीय गाडीहरुको प्रयोग गर्दैछौं । इन्डक्सन चुल्होहरुको प्रयोग बढाउँदैछौं । उद्योगहरुको विकास गर्छौं र हामी विद्युतको खपत बढाउँछौं । अहिले पनि विद्याुतको माग बढिरहेको छ । मन्त्रीकहाँ निवेदन लिएर कोही १० मेघावाट, कोही २० मेगावाट विद्युत मागिरहेका छन् । हामीले बिजुली दिन सकिराखेका छैनौं । अनि यस्तोबेलामा हामीले विद्युत किन्दैनौं भनेर लगानीकर्तालाई तर्साउने रु हामीले उनीहरुको लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
तमोर-चिसाङ डाइभर्सन, सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन, कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन, नौमुरे-कपिलवस्तु डाइभर्सन, माडी-दाङ डाइभर्सन आदि बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरु हामीले लिइराखेका छौं । यसले गर्दा खेतबारीमा सिंचाइ क्षेत्र वृद्धि हुन्छ । उत्पादन वृद्धि हुन्छ ।
तर, हामीले तमोर-चिसाङ डाइभर्सन, कमला-मरिन डाइभर्सन, भेरी बबई डाइभर्सन इत्यादिको कुरा गरिरहेका छौं । यसरी नदीको पानी डाइभर्सन गरेपछि पानीजहाज कसरी चल्ला ?
यसमा २००६ मा हामीले प्रतिस्पर्धा गराएकै हो । माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र बूढीगण्डकीमा कोही आएनन् । पछि २००८ मा बूढीगण्डकीमा मात्रै टेण्डर गर्दा पनि कोही आएन । अहिले यो कम्पनीले म गर्छु भनेको हुनाले ऊसँग सम्झौता भयो । तर, यस्ता ठूला आयोजनाहरुमा ठूलो रिस्क हुने हुनाले सामान्यतयाः १० र २० मेघावाटको जस्तो सजिलो हुँदैन ।
त्यसकारण हामीले हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनको कसरी अधिकतम प्रयोग गर्ने र कसरी भोलिको पुस्तालाई हुने गरी दीगो रुपमा संरक्षण गर्ने रु यी दुईवटा चुनौती हाम्रा सामु छन् । यस्ता ठुल्ठूला प्राकृतिक स्रोतहरुको लडाइँमा राष्ट्रियता र स्वाधीनता धरापमा पर्ने, जोखिममा पर्ने गरेका छन् । त्यसैले यसमा स्वाभाविकरुपले अन्तरराष्ट्रिय चासोहरु छन् ।